ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ တွေထဲက နေတိုးနဲ့ တွဲပြီး ညစာ စားပွဲ တက်ချင် တယ် နှင်းစု ခိုင်သိန်း
အောင်မြင် ကျော်ကြား သူ တွေထဲက နေတိုးနဲ့ တွဲပြီး ညစာ စားပွဲ တက်ချင် တယ် နှင်းစု ခိုင်သိန်း
နှင်းစု ခိုင်ဦးက ဝိုင်းစု ခိုင်သိန်း ရုပ်တူ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရခဲ့ တာကနေ အနုပညာ လောက ထဲကို ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Talent & Model Agency က မော် ဒယ်လ် တင်မိုး လွင်ရဲ့ တပည့် တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။ သူက ၂၀၁၃ ခုနှစ်
အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် ဘာကိုမှ ကြိုးကြိုး စားစား မလုပ် ဖြစ်ခဲ့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ တာ့ အလုပ်တွေ ကြိုးစား လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထား တဲ့ သူ့ကို 8days ရဲ့ cover photo အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ ပါတယ်။
နှင်းစုကို တွေ့ရရင် အမြဲ တမ်း ပျော်ရွှင်နေ တာဘာ ကြောင့် လဲ။ နှင်းစုက ဘယ်အ လုပ်ကို မဆို စိတ်လက် ပေါ့ပါးစွာ ပျော် ပျော်ရွှင်ရွှင် လုပ်တတ် တာပါ။ ဒီ သရုပ်ဆောင် လောကထဲ မှာလည်း နှင်းစုကို အားလုံးက ချစ်ကြ လို့ထင် ပါ
တယ်။ နိုင်ငံ ရပ်ခြား မဂ္ဂဇင်း တွေက sexy ပုံရိပ်တွေ အတွက် ငွေကြေး အများ ကြီးနဲ့ ရိုက်ဖို့ ကမ်း လှမ်းခဲ့ ရင်ရော။
နိုင်ငံတ ကာမှာ ပြိုင်ပွဲ ၀င်လို့ စင်ပေါ်မှာ ရေကူး ၀တ်စုံနဲ့ လျှောက် ရတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရုံ သတ်သတ် တော့ လက်ခံရိုက် ကူးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ နှင်းစု ခိုင်ဦးမှာ ဘယ်လို အရည်အ ချင်းမျိုးတွေ ရှိတယ် တင်လဲ။
အဓိက နှင်းစု တစ်ပါးသူ အပေါ်မှာ မနာလို စိတ်မရှိ တာပါပဲ။ ဒီအလုပ် မလုပ် ဖြစ်ခင်က ကိုယ်နှစ် သက်တဲ့ အောင်မြင် ကျော် ကြားသူ ဘယ်သူ ဖြစ်မ လဲ။
နှင်းစု ဆရာမ တင်မိုးလွင် ကို အရမ်းအား ကျတယ်။ သူကြော် ငြာရိုက်တာ ပဲဖြစ်စေ၊ အစီအ စဉ်တင် ဆက်သူ လုပ်တာ ပဲဖြစ်စေ၊ အောင် မြင်အောင် လုပ်နိုင် တယ်။ သူက နှင်းစု အားကျ ရတဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ။
ခုရော သူ့ဆီက ဘယ်လို သွန်သင်မှု တွေရှိ လဲ။ တီချယ်က တစ်ခါတွေ့ တိုင်း တစ်ခါ ဆုံးမစကား ပြောပါ တယ်။ သူ့ဆီက သင်ယူစ ရာတွေ မကုန် နိုင်ဘူး။ နှင်းစု အတွက် အကောင်း ဆုံး စိတ်ဖိ စီးမှု ဖြေဖျောက် နည်းက
အိပ်ပစ် လိုက်တယ်။ တစ်ခါ တစ်ရံ မှာတော့ သူငယ် ချင်းနဲ့ ချိန်း ပြီး မုန့်စား ကြတယ်။
အိပ်ရာ ထရင် အမြဲတမ်း လုပ်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ နှစ်ခုက facebook သုံးတယ်။ မျက်နှာမ သစ်ဘဲ တီဗွီ ကြည့်တယ်။ အောင်မြင် ကျော်ကြားသူ တွေထဲက ဘယ်သူနဲ့ တွဲပြီး dinner ပွဲ တက် ချင်လဲ။ ကိုနေ တိုးကို ရွေးမယ်။ သူ သရုပ်ဆောင်
တာကြိုက် တယ်။ over မဖြစ်ဘူး။ သူ့အကြည့်က အရမ်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ စူးရှ တယ်။ နှင်းစု သဘောကျ တယ်။
အားလပ် ရက်မှာ အလုပ် ချင်ဆုံး အလုပ်က..ခရီးတွေ ပဲသွား ချင်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စ မပါတဲ့ အပန်းဖြေ ခရီးမျိုး သွားချင်တယ်။
pm Saturday, January 25, 2014 Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
ဖုန်းအားသွင်းရင်း ဖုန်းပြောရင် ပေါက်ကွဲပါတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းများ ထွက်ပါတယ်။ ယင်းသတင်းများဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲတာတွေရော၊ ...
အသက်(၈၄)နှစ်အရွယ် ဦးစံမြင့်ကို တွေ့ရစဉ်/ဓာတ်ပုံ - ကျော်ဇင်သန်း ‘‘မောင်မင်းလူကလေး’’ မြန်မာစကားကို အင်္ဂလိပ်လေယူလေ...
Lu Lu Aung - New Talented Model Collection Album
Lu Lu Aung random collection photos collection. She isanew model and write something which you most impressed about her photos. Enjoy9m...
ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ အနှံ့အပြား မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ မယားထမ်း ပြေးပွဲ
မေလ ၈ ရက် ၂၀၁၃ မယားထမ်း အပြေးပြိုင်ပွဲ (Wife Carrying Championship) ကို စတင်ပြု လုပ်တဲ့ နိုင်ငံကတော့ ဥရောပတိုက်မှ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင...
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသစ် သွန်းဆက်နဲ့ အင်တာဗျူး
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့ အဓိကနေရာက ပါဝင်ထားတဲ့ “နမ်းသူ့သမိုင်း” ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်မိခဲ့ဖူးသူဆိုရင် သွန်း...